SoapUI: Ngwaọrụ nke ndị nyocha maka ịrụ ọrụ na API | Martech Zone
Ọ dịka ọ bụla m zutere ezigbo enyi, ana m anụ maka ngwa ọrụ ọhụụ na-eme ka ndụ dị mfe. Mụ Kọfị David Grigsby kwuru, a .NET mbanye ngwakọta nke na-arụ ọrụ maka DocuSign. Mụ na David na-atụle SOAP (Simple Object Access Protocol) na API REST (nke ahụ bụ otú anyị si tụgharịa). A na m enwekarị mmasị na REST API n'ihi na ọ dị mfe iji anya nke uche hụ ma mepụta mkpụkọ n'otu oge yana - yana belata mbipụta yana nyocha. David, dị ka onye NET guru, hụrụ SOAP n'anya ebe ọ na-enye ọtụtụ ọrụ mgbagwoju anya na ohere.
David gwara m ihe nzuzo nke na-arụ ọrụ na ngwa ngwa ngwa SOAP (APIs)… Ncha. (PS: O di m ka nrọ m banyere APUI site na 2006 nwere ike ụbọchị ụfọdụ mezuo!)
SoapUI bia na uzo abuo, Open Source na Pro. Prodị Pro na-enye gị ohere ịme ihe niile Open Source na-eme, mana na-agbakwunye ụyọkọ mmepụta na atụmatụ nchekwa oge maka $ 349 kwa ikike.
Ndepụta na Eddị editọ maka visualizing data - Ọ bụ ezie na Onye Ndepụta Ihe Ndepụta na-ewepụta nnukwu nchịkọta nke data dị na ozi XML, Editordị Editor na-enye interface dị mfe maka ịbanye data na arịrịọ. Ndị editọ abụọ ahụ na njikọ ga-eme ka nnwale gị ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe.
Ọnọdụ data - bubata isi data nke ịchọrọ ịnwale. A na-akwado usoro niile dị mkpa, gụnyere faịlụ ederede, XML, Groovy, Excel, Directory, JDBC (Relational Database), na Internal Grid data.
Point na Pịa Ule - usoro iji mee ka ihe nlere ule gị dị mfe site na ikwe ka ịdọrọ na dobe arụmọrụ ngwa ngwa.
Nkwenye XPath - Creatmepụta nkwenye na-eme na obere usoro na sekọnd.
Uche - lee lee ka ole ọrụ ọrụ ị nwalere? Nke a na - enye gị ohere inweta nyocha ma hụ mpaghara arụmọrụ a nwalere nke ọma yana mpaghara ịchọrọ iji oge ọzọ. I nwekwara ike malite ịkụ ala ọbụna n'ihu wee kọwaa kpọmkwem ihe a nwalebeghị na akụkụ ndị ekwesighi.
Nnwale nche - enwere ọtụtụ mwakpo ndị hakes pesky ga-atụba gị, dịka: bọmbụ XML, injections SQL, XML na-adịghị mma, fuzzing, cross-site scripting wdg. .
chọrọ - Nkwado nke SoapUI Pro chọrọ bụ atụmatụ bara nnukwu uru maka ịdepụta ule gị megide azụmaahịa ma ọ bụ ọrụ teknụzụ.
Ntughari - edozi ya site na iji “nchọnchọ-na - edochi” ụdị ọrụ.
Onye na-ewu SQL - na - enyere gị aka ịmepụta nkwupụta SQL na eserese eserese, na-eme ka ịnweta data dị mfe maka mmadụ niile.
akuko - mepụta akụkọ zuru ezu na Project, TestSuite, TestCase, ma ọ bụ LoadTest. Bipụta ma ọ bụ bupu ha n'ụdị ọkọlọtọ ọ bụla, gụnyere PDF, HTML, Okwu na Excel, ma hazie ha.
nkwado - dịka akụkụ nke ikikere ị ga-enwetakwa nkwado otu afọ na ikikere gị.
Tags: APIapi ulemmemme mmemmefọduruezumike apinchangwa nchangwaọrụXML
Ọnye na -bụ Collin Schneider?
Daalụ maka biputere nke a, Doug. Ejirila m ụzọ abụọ maka mmepe maka ndị ahịa. SOAP yiri ka o siri ike ịrụ ọrụ ma e jiri ya tụnyere REST n'ihi ịdabere na usoro XML. SoapUI nwere ike ime ka SOAP ghara inwe mgbu karịa… ma ha nwere onye nrụnye Mac! Aga m elele ya.
Ọbụna na nnukwu ngwaọrụ dị ka nke a n'agbanyeghị, echere m na m ka ga-ahọrọ API ọhụụ ugbu a. Nke ahụ bụ otú m tụgharịa 🙂
Anọnyeere m gị na @ twitter-33588968: disqus! Ma ngwa ọrụ a masịrị m - ọ na - arụkwa ọrụ na RESTful APIs.
David W Grigsby kwuru
Dị ka ha na-ekwu na enwere ezigbo oge kọfị na ezigbo enyi na ike ịkekọrịta ihe ọmụma dị mkpa. Daalụ Doug maka mkpu na ike ịkekọrịta ihe anyị abụọ hụrụ n'anya ma nwee nnukwu agụụ maka. Ọzọkwa ọ na-eme Kwụsị oku yana ịkọwapụtara n'okpuru nke bụ ihe kpatara na ọ bụ ọkacha mmasị m debugging na prototyping ngwá ọrụ maka API. Lee gị n'April mgbe m laghachiri n'obodo in